हद भन्दा बढी नै सेक्सी भएको भन्दै यी नायिकामाथी सरकारले प्रतिवन्ध लगायो !(तस्विर हेर्नुस ) – NepalayaNews.com
हद भन्दा बढी नै सेक्सी भएको भन्दै यी नायिकामाथी सरकारले प्रतिवन्ध लगायो !(तस्विर हेर्नुस )
अनेकथरी मेअकप गरेर हुन्छ वा अन्य कुनै माध्यमबाट युवत्तीहरु केटाहरुको तुलनामा धेरै आर्कषक देखिन चाहान्छन् । यो हामीले भनिरहेका छैनौ यी कुराहरु अध्यनहरुबाट प्रष्ट भइसकेका छन् । महिलाहरु अरुलाई देखाउनको लागि नै भएपनि आफुलाई असहज हुँने पहिरन लगाउन रुचाउनछन् ।
यो बिचमा सेक्सी हुनुको हद पार गर्छ उसका लागि भने कयौ समस्याहरु उत्पन्न हुने गर्छन । एक कम्बोडियन नायिकालाई एक वर्षसम्म फिल्म खेल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
देशको संस्कृति मन्त्रालयले उनी धेरै सेक्सी भएको भन्दै उनलाई फिल्म खेल्न प्रतिबन्ध लगाइएको हो । २४ वर्षकी नायिका डेनी क्वानले थुप्रै फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छिन् ।
हद बोल्ड देखिन नियम तोडेको भन्दै उनलाई संस्कृति मन्त्रालयले पुनः पाठ सिकाउन सो कार्य गरेको हो । अन्य नायिकालेझै आफूले कामुक भूमिकामा फिल्न नखेलेको बताउने उनको फेसबुकमा मात्र ३० लाख भन्दा धेरै फलोअर छन् ।
‘मलाई थाहा छ चाहे अनुसार ड्रेसअप गर्न पाउनु मेरो अधिकार हो, तर हाम्रो संस्कृति र कम्बोडियन जनताले यो स्वीकार्न सक्दैनन् ।’
उनले भनिन्–‘फेसबुकमा तस्विर पोस्ट गर्दै म जस्तो सेक्सी छु अब त्यस्तो नदेखिने प्रयास गर्छु ।’ एजेन्सी
एप्पलले हरेक ३/ ४ हप्तामा किन्यो एउटा कम्पनी १२ बैशाख २०७६, बिहीबार ११:४०
अमेरिकी आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ गर्न बाइडेनद्वारा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर १२ बैशाख २०७६, बिहीबार ११:४०
स्व. आङ् पासाङ् लामाको परिवारबाट शेर्पा किदुग अमेरिकालाई पचास हजार डलर सहयोग १२ बैशाख २०७६, बिहीबार ११:४०